ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ Mobile | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေပြီးပါပြီ၊ ဒီအားလပ်ရက်ရာသီ၊ မိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး - သို့မဟုတ် mcommerce - ဖြစ်ခဲ့သည် ကြီးမားလိမ့်မယ်။ တကယ်စိတ်ပျက်စရာပါ။
Cyber ​​Monday သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏တီထွင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်၏တစ်နှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းဈေးဝယ်နေ့ဖြစ်လာသည်။ ယခုအားလပ်ရက်ရာသီတွင်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကျော်ရှိသည့် ၁၅% အထိတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Facebook ကဲ့သို့ဇာတိလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများနှင့်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုကြော်ငြာခြင်းသည်အားလပ်ရက်စျေးဝယ်ခြင်း၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည့်ဤအွန်လိုင်းရောင်းအား၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ဖော်ရန် Ampush ကဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို Cyber ​​Monday သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ပြသသည်။
Distimo: App Analytics, Conversions နှင့် App Store Tracking
ဒီဇင်ဘာ 16, 2013 မှာ 5: 29 AM
အခြားအကြီးအ post ကို Doug! ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောဖတ်ပြီးအလွန်သိကောင်းစရာများဖြစ်ခဲ့သည် ...
ဒီဇင်ဘာ 16, 2013 မှာ 6: 33 AM
ဒီနေ့ခေတ်နည်းပညာဘယ်လောက်မြန်မြန်ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာအံ့သြစရာပဲ။ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်၊ ဒါကဖောက်သည်အသစ်တွေရဖို့ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းဖောက်သည်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုလို့ငါအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။ အထူးသဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်စျေးကွက်သို့သွားရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံးသပ်ချက်များသည်သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
ငါတက်ဘလက်များပေါ်တွင်ရောင်းအားဤနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီသလဲ? ငါနေ့တိုင်းတက်ဘလက်တစ်လျှောက်သယ်ဆောင်လာတဲ့လူတွေ၊ အထူးသဖြင့်လူ ဦး ရေပိုများတဲ့လူတွေပိုများလာတယ်။ ဒီဟာကပိုပြီးသုတေသနပြုဖို့လိုအပ်တဲ့ကိရိယာ / စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ အလွန်ကြီးစွာသော infographic အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
16:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 17 တွင်
မိုဘိုင်းအတွက်စာရင်းဇယားအများစုမှာအမှန်တကယ်တက်ဘလက်ရောင်းအား၊ @monicawomble: disqus ပါဝင်သည်
ဒီဇင်ဘာ 17, 2013 မှာ 6: 37 AM